Tartan iyo Tacliin 2015: Natiijada tartankii xalay iyo dugsiyada caawa tartamaya – Radio Daljir
Tartan iyo Tacliin 2015: Natiijada tartankii xalay iyo dugsiyada caawa tartamaya
Juunyo 27, 2015 1:30 b 0
Dugsiyada sare Hawd Secondary oo xarunriisa tahay magaalada Buuhoodle iyo Jariiban secondary ayaa xalay ku tartamay qaybtii hore ee barnaamij aqooneedka tartanka dugsiyada sare Puntland Tartan iyo Tacliin ee ka baxa Radio Daljir.
Tartanka ayaa waxaa labada dugsi ay soo bandhigeen dadaal aad u heer sareya , waxaana kaliya lagu kala adkaaday laba dhibcood oo uu ku guulaystay dugsiga Hawd Secondary , labada dugsi ayaa midkiiba la waydiiyay shan su\_’aalood.
Dugsiga sare Hawd ayaa tartamayaashiisa la waydiiyay shantii su\_’aalood ee xaqa u lahaayeen , waxaa ay ka jawaabeen dhamaan shantoodii su\_’aal , waxaa ay ka faa\_’iiysteen hal su\_’aal oo Jariiban Secondary kasoo gudubtay , sidaasina waxaa Hawd secondary uu ku helay kow iyo toban dhibcood.
Jariiban Secondary oo la waydiiyay shan su\_’aal ayuu ka jawaabay afar ka mid ah su\_’aalahaasi , waxaana uu garan waayay hal su\_’aal sidaasi ayuu ku helay sideed darajo, waxaana tartankii xalay qaybta koowaad ku guulaystay dugsiga Hawd Secondary ee magaalada Buuhoodle.
Qaybtii labaad ee tartanka ayaa waxaa isku arkay dugsiyada kala ah Xaaji Salaad Carmo iyo Muntada Burtinle , waxaana guulaystay dugsiga Muntada Burtinle oo keenay sideed dhibcood oo laba ka faa\_’iiaysi tahay iyo sadex ka mid ah shantiisii su\_’aalood oo uu ka jawaabay sidaasina uu ku helay sideed dhibcood.
Xaaji Salaad Carmo ayaa waxaa uu ka jawaabay laba ka mid ah shantii su\_’aal ee la waydiiyay , isagoona helin ka faa\_’iidaysi , waxaana sidaasi uu ku helay afar dhibcood , waxaana ka guulaystay dugsiga Muntada ee degmada Burtinle.
Midigalle-Sanaag Vs Ilays ( Laascaanood)
Balli-dhidin – Bari Vs Nawaawi (Garoowe)
TARTAN IYO TACLIIN:Kulamo Adag oo Dhacaya Caawa Midigalle-sanaag Vs Ilays Laascaanood
Madaxweynaha Jubbaland iyo wasiirka Arimaha Dibadda Itoobiya oo Addis Ababa kuwada Kulmay